Dzidziso diki yekurangana. Chii chiri kumashure kwema anti Stallmans? | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zvinoshamisa (uye zvisina kukodzera) maitiro akashata pakudzoka kwaRichard Stallman kuFree Software Foundation, inotikoka isu kupfeka ngowani yealuminium uye edza kuona zvinopfuura zvirevo zvinoenderana nekurongeka kwezvematongerwo enyika. Rega zvive pachena kuti uku kufungidzira kwangu pachangu uye kuti chokwadi chete ndicho chinoratidza kana ndiri pachokwadi kana ndichifanira kuchinja mushonga wangu.
Ndine mbiri tsananguro yekugadzira. Ndakapedza makore ndichitsoropodza Richard Stallman. Kune zvandaifarira, ndakapedza nguva yakawanda ndichituka zvine chekuita nesoftware pane kugadzira zvigadzirwa zvemakwikwi zvichibva pasoftware yemahara. Ini zvakare ndaisada kusimudzira Hardware inokwanisa kuitira kuti ikwanise kumhanya FSF yakatenderwa kugoverwa kweLinux. Neraki, izvi zvakachinja nekuuya kwevanoshamwaridzika vatengesi vehardware, asi kwete nekuda kwaStallman kana iyo Mahara Software Foundation.
Ukuwo, Pakati pevanyori veLinux Vakapindwa muropa, ini ndini ndakanyatsotsigira pachena kuiswa kwemakambani munyika yemahara uye yakavhurwa sosi software, pamwe nekuonekwa kwesarudzo nyowani dzesoftware.
Zvandanyora izvi, kuti chinzvimbo changu chinzwisiswe, yaive nguva yekudzika kubhizinesi.
1 Dzidziso diki yekurangana kuyedza kutsanangura anti Stallman mania
2 Diego Unotenda zvechokwadi here zvauri kunyora?
Dzidziso diki yekurangana kuyedza kutsanangura anti Stallman mania
Mumwe wangu Darkcrizt akaita basa rakanakisa muchidimbu rutsigiro nekuramba kwakanyoreswa mukupera kwesvondo. Kusiya parutivi avo vanoita zvematongerwo enyika, rinenge rondedzero yese yemasangano anopikisa ataurwa (uye iwo akawedzerwa gare gare) ane chimwe chinhu chakafanana. Yakasimba yemakambani rutsigiro rwemari.
Mozilla Foundation: Iye zvakanyorwa Yakareba uye yakaoma panzvimbo inotsvedza yeMozilla Foundation inokurudzirwa nekuratidzira kufarira kukuru kururamisa kwezvematongerwo enyika pane kugadzira browser rakanaka. Iine chikamu chidiki uye chidiki chemusika, mutsigiri wayo mukuru wezvehupfumi ndiGoogle. Munguva pfupi se yakadzingwa yevashandi nemapurojekiti ayo akatorwa pakarepo neGoogle neMicrosoft pakati pemamwe makambani.
Vhura Sosi Initiative: Sangano rine chinangwa chakafanana neicho cheFree Software Foundation, Munguva pfupi yapfuura aifanira kudzokorora kusarudzwa kwekomiti yako inotungamira nekuti nekutora mukana wekushupika mukati mekuita kwemukati, mhedzisiro yakashandiswa. OSI munguva pfupi yapfuura yakaramba kusimbisa rezinesi ingadai yakadzivirira kambani kubva inoshandisa Elastic tekinoroji yemahara kukwikwidzana nebasa rakafanana. Iyo kambani Elastic yaida kuchengetedzwa kwaive AWS, Amazon's cloud services division iyo, zvakangoitikawo, ndeimwe yevanotsigira premium yeOSI..
Tsvuku Huru:Iyo yeBM subsidiary inotsigira yeGNOME (Iyo GNOME Foundation yaive yeimwe yekutanga kubuda ndokuramba Stallman) Sezvineiwo, inotsigirawo iyo Open Source Initiative. Munguva pfupi yapfuura Red Hat yaive muziso rekupokana nekuti akachinja chinangwa yeiyo CentOS chirongwa, kubva pakuve imwe nzira yeRed Hat Enterprise Linux kuva mubhedha wayo wekuyedza.
Ngatigarei kwenguva yakati rebei pane iyo nyaya yeRed Hat. Maererano ne gwaro yakaburitswa Nyamavhuvhu 2020 neFSF $ 708.016 yakabva pamitezo yemitezo, nepo yakawanda yemari yayo, $ 1.383.003, yakabva kune vamwe vanopa saRed Hat.
Avo vari muheti tsvuku vakatsunga kuita kuti mari yavo ibhadhare:
Red Hat ndeye mupi wenguva-refu mupi uye anobatsira muzvirongwa zvakagadziriswa zveFSF, nemazana evabatsiri uye mamirioni emitsetse yekodhi yakapihwa. Tichifunga mamiriro ezvinhu ekutanga kusiya basa kwaRichard Stallman mu2019, Red Hat akatya kuziva kuti anga adzoka zvakare kuboka revatungamiriri reFSF. Semagumo, isu tiri kutomisa mari yese yeRed Hat kuFSF uye chero zviitiko zvakaitiswa neFSF. Pamusoro pezvo, vazhinji veRed Hat vanopa rubatsiro vatitaurira kuti havacharonge kutora chikamu muzviitiko zvakatungamirwa kana kutsigirwa neFSF, uye isu tinovatsigira.
Asi, iyo inotevera ndima ichafadza vanorangana.
Mu2019, takabvunza FSF bhodhi kuti itore mukana wakagadzirwa nekuenda kwaStallman kuchinjira kune rakasiyana-siyana uye rinosanganisira bhodhi dhizaini. Iyo FSF yakangotora mashoma matanho mune ino nzira. Kudzoka kwaRichard Stallman kwakavhurazve maronda atakatarisira kuti achapora zvishoma nezvishoma mushure mekuenda kwake. Isu tinotenda kuti kudzoreredza kuvimba kwenharaunda yemahara software, iyo FSF inofanirwa kuita shanduko yakakosha uye inogara mukutonga kwayo.
Mumwe haangabetsere kushamisika kana "shanduko dzakakosha uye dzinogara" dzakaita avo vakaita chirongwa cheCentOS mumutumbi wayo unodzora Mukutsinhana nerutsigiro rwemari, vakapedzisira vabatanidza nhengo dzekambani uye vachibvumira shanduko yenzira yeprojekti.
Diego Unotenda zvechokwadi here zvauri kunyora?
Ndeupi Stallman chipingamupinyi chakasimba pamisimboti yemahara software inoshandurwa kuti ifarire zvido zvemakambani? Kuti ivo varikushandisa maitiro avo asina mubvunzo uye yekudzima fashoni kuti vazvibvise?
Nenzira imwe chete, masangano ataurwa aya haashomeka uye anongotsvaga kuvandudzwa kwesoftware yemahara. Ingori nhevedzano yezvakaitika zvandinoziva kuti ndiri kududzira zvisizvo. Zvakare, handina kuwana kubatanidzwa kwaGeorge Soros chero kupi, uye hapana dzidziso yekurangana yakakosha munyu wayo inogona kushanda pasina kubatanidzwa kwaSoros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Dzidziso diki yekurangana Chii chiri kumashure kwema anti Stallmans?
Iyo GPL rezinesi inoburitswa neFSF uye inogona kungovandudzwa neiyo FSF (verenga rezinesi zvine hungwaru).
Iyo GPL yakagara iri chipingamupinyi kumakambani makuru ayo atora nyika yemahara. Dai iyo isiri yekopyleft yeGPL, makambani makuru aigona kuumba, semuenzaniso, linux kernel kuigoverazve nechero anti-maficha avanofarira.
Iyo yekupedzisira itsva vhezheni yeGPL yakasununguka semakambani makuru senge, zvinongogoneka kana tikadzikisa hutungamiriri hweFSF saka hunhu hwemakambani makuru aya anogona kutora kutonga.
Ini handidi kuita rangano, asi zvirokwazvo zvinongoitika netsaona kuti kune vanosaina facebook, google kana microsoft mune iyi huroyi yekuvhima.
"Ini handidi kuita rangano, asi zvirokwazvo zvakangoitikawo kuti kune vanosaina facebook, google kana microsoft mukuvhima uku.
Ini ndanga ndichida kukupindura, uye ini ndokupindura, kuti apa ndipo panopararira, kuti ivo "vane moyo wakanaka" uye kuti ivo "vanoziva zvakatinakira", uye zvisingaite kuti kuburitswa kwechinyakare ecol strip kwakauya mupfungwa dzangu , painovhiya murwere chiremba anokumbira forogo, murwere anopenga uye chiremba anopindura achiti, "Ah, usazvidya moyo, tine chipangamazano weMicrosoft uyo anoziva zvakanakira munhu wese."
Linux neGPL ibwe hombe mubhutsu kune zvakanyanyisa zvishuwo zvemakambani, akakura zvekuti anovharira nzira yavo.
Pindura kuna klaus
Theseus akabuda muCretan labyrinth achibatsirwa netambo yaAriadna; kana nzira yemari ikateverwa, hasha dzakanangana naStallman dzinogona kutsanangurwa.
Cui bono? Cicero angati.
Kuti kana vachizouya kuzoratidzira tsika dzechinyakare, kuchinyorwa changu, ini handisi kuzosiiwa kumashure.
Iyo inogona zvakare kuve Cui prodest (Ndiani anobatsirwa?)
Stallman hapana mubvunzo anotsamwisa nekuti haaumbike, sevamwe vazhinji. Chinhu chakajairika icho Diego anowana pakati pevadzivisi, pakupedzisira. imari, izvo chaizvo zvakakosha kudzivirira rusununguko, asi iwe unofanirwa kungwarira kwaunoiwana. Usave zvinhu zvekuti nekuwana mamwe mabasa maviri tinorega chinangwa cherusununguko rwechokwadi. Uye izvi hazvingoshandi pane software. Iyi mitemo vanababa, yevakachena. Ini ndinotsigira Stallman muchiratidzo chake chekutanga, icho chaicho chisina kuchinja.
Uyu munhu aburitsa addon kunongedza mapeji anotsigira Stallman, pure Nazi.